गाह्रो दिनको परिश्रम पछि घरमा नै बस्नु राम्रो हो र रूलेट भिडियो च्याटमा ती व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नुहोस् जुन साँच्चिकै राम्रो छन् र जसले कुनै पनि विषय छलफल गर्न चाहन्छन्। तर यो यस्तो पनि हुन्छ कि तपाई वास्तवमै व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्न। र त्यसोभए अतिथिलाई कसरी छुटकारा दिने? वा कसरी कुराकानी सुरु गर्ने? र कसरी समाप्त गर्ने? र सामान्य रूपमा, कहाँ योग्य योग्य वार्तालापहरू पाउन? यी सबै र अन्य धेरै प्रश्नहरूको च्याट च्याट द्वारा जवाफ दिन सकिन्छ। च्याट रूले विशेष स्रोत हो जुन सिर्जना गरिएको छ ताकि मानिसहरूले समस्या बिना संवाद गर्न सक्दछन्। ताकि सबैसँग संचारको लागि साझेदार छनौट गर्न सक्ने अवसर छ र यदि कुरा मनपर्दैन भने कुराकानी अन्त्य गर्न सक्नुहुनेछ। यी सबै र अन्य धेरै केसहरूमा च्याट रूलेट उपयोगी हुन सक्दछ। यो यस्तो लोकप्रिय सेवा हो कि विश्वभरका मानिसहरूले धेरै वर्षदेखि यसलाई प्रयोग गर्दै आएका छन्। Chatroulette दिन प्रति दिन गति प्राप्त गर्दै छ। लाखौं पुरुष र महिला, केटाहरू र केटीहरू यस स्रोतमा जान्छन् र कुराकानी गर्छन्। तिनीहरू खुशीको खातिर कुराकानी गर्छन्, सञ्चारको अनुभव प्राप्त गर्नका लागि, भेटका लागि, साथीहरू र तिनीहरूका जीवन साथीहरू खोज्नको लागि। र यो खुशी छ। साइटमा जानुहोस् र च्याट बिल्कुलै कोही पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ निश्चित रूपले प्रतिबन्धहरू छन्, तर उनीहरूको बारेमा थोरै पछि। अब यस अनलाइन रौलेट च्याटको सम्भावनाहरूलाई नियालेर हेरौं।
त्यसोभए, च्याट रूलेटको आफ्नै विशिष्ट नियमहरू र प्रतिबन्धहरू छन्। कुलमा, यी नियमहरू सरल छन् र ती पालन गर्न यो सम्भव छ। तर अब आधारभूत नियमहरू हेरौं। त्यसोभए तिनीहरू यहाँ छन्:
00 00 ०००7 उमेर प्रतिबन्धहरू। च्याट आगन्तुक कम्तिमा १ 18 बर्षको हुनु पर्छ। 00 00००8
00 00००7 तपाईं कुराकानीमा केहि पनि छलफल गर्न सक्नुहुन्न जुन कानूनले निषेध गरेको छ। 00 00००8
यौन सेवाहरु प्रस्ताव गर्न सकिदैन। 00 00००8
न। 00 00 7007, आतंकवादसँग सम्बन्धित सबै कुराको बढुवा हुन सक्दैन। 00 00००8
तपाइँ कुनै पनि आधारमा वार्ताकार अपमान गर्न सक्नुहुन्न: लि ,्ग, जाति, रुचि, आदि।
सिद्धान्तमा, यी ती नै आधारभूत नियमहरू हुन् जुन कुनै असफल बिना पछ्याउनुपर्दछ। थप रूपमा, यो विनम्र कुराकानी गर्न र वार्तालाप उहाँ हुनुहुन्छ रूपमा स्वीकार गर्न योग्य छ। च्याटलेटले प्रत्येक प्रयास गर्छ कि आगन्तुकहरू कुनै पनि परिस्थितिमा विश्वस्त र सहज महसुस गर्न सक्छन्। यसका लागि, न्यूनतम नियमहरू सिर्जना गरिएको छ जुन च्याटमा जीवनलाई यस अद्भुत स्रोतको सबै प्रयोगकर्ताहरूको लागि सुविधाजनक बनाउँदछ। यदि तपाईं यी नियमहरू पालना गर्नुहुन्छ भने, त्यसपछि सञ्चार रमाइलो हुनेछ। र वार्तालापहरू सन्तुष्ट हुनेछन् र एक पटक फेरि कुरा गर्न प्रस्ताव गर्नेछन्। यदि नियमको पालना गरिएको छैन र अन्य प्रयोगकर्ताहरूबाट गुनासोहरू प्राप्त भएको छ भने, त्यसपछि प्रयोगकर्ताको खाता जसले उजूरी प्राप्त गर्दछ र जो कुराकानी नियमहरू उल्लlates्घन गर्दछ अवरुद्ध हुन सक्छ। कुनै च्याट रूले उपयोगकर्तालाई निषेधको लागि पठाउन सकिन्छ यदि उसले नियम पालन गरेमा अवश्य अवलोकन गर्नुपर्दछ।च्याटमा आफै जान र कुराकानी सुरू गर्न, तपाईंलाई निम्न आवश्यक पर्दछ:
00 00 ०77 कम्प्युटर वा टेलिफोन
00 00 ०77 वेबक्याम
र तपाईं कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरू भन्छन्, कटौती बिना। तपाईं शाब्दिक रूपमा केहि गर्न सक्नुहुन्छ: हाँसो, ठट्टा, तर्क, र सामान्यतया ती व्यक्तिहरूको साथमा रमाईलो गर्नुहोस् जुन तपाईं मनपराउनुहुन्छ। यो कुराकानी च्याट रूले परियोजना आकर्षित गर्दछ। यहाँ तपाईं केवल ती व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ जो साँच्चिकै रमाइलो छन् र जससँग तपाईं कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ। च्याट रूलेट प्रयोग गरेर यो फाइदा भनेको तपाईंलाई सम्पर्कको लागि धेरै आवश्यक पर्दैन। केवल एक कम्प्युटर वा उपयुक्त फोन र इन्टरनेट। हो, मलाई अझै एक माइक्रोफोन चाहिएको छ। र यहाँ बचत नगर्न उत्तम छ। जे भए पनि, राम्रो गुणको माइक्रोफोनले राम्रोसँग सुन्नको लागि राम्रो अवसर प्रदान गर्दछ र तपाइँको विचारधारालाई तपाइँको मनमोहक र मनमोहक आवाजमा लाउँदछ, हस्तक्षेप र खराब चीजहरू बिना खराब माइक्रोफोनको गुणस्तरमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने अन्य चीजहरू।
अनलाइन च्याट रूले साइटमा संचारले सधैं यो कारणका लागि खुशी ल्याउँदछ कि यस स्रोतको प्रत्येक प्रयोगकर्ताले छनौट गर्न ठूलो अवसर पाएको छ। तर के छनौट गर्ने बीच, हेरौं। त्यसो भए, छनौट गर्न सकिन्छ:
L 00०००० वार्तालापकर्ता बीच 00 00००००
00 00 ०7 communication सञ्चार ट्यारिफ बीच: भुक्तान गरिएको र नि: शुल्क
Communication 97००00 सामान्य संचार र प्रीमियम मोडको बिच
वार्तालापहरूको छनौट कि त भुक्तान वा नि: शुल्क हुन सक्छ। यो एक विशिष्ट स्रोतमा राखिनेछ जुन प्रयोगकर्ताले विशेष रूपमा सञ्चारको लागि छान्छ। केही संसाधनहरूमा उनीहरूलाई नि: शुल्क वार्तालापको लि choose्ग छनौट गर्न अनुमति दिइन्छ, तर केहिमा तिनीहरूलाई अनुमति छैन। तसर्थ, यहाँ तपाईं नियमहरू र च्याट मेनू रूलेट मा हेर्न आवश्यक छ।
सशुल्क र नि: शुल्क सुविधाहरू बीच छनौट स्पष्ट छ। कुनै च्याट रूलेमा, तपाई कि त भुक्तान गरिएको वा नि: शुल्क संचार योजना छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ मुख्य कुरा ती विकल्पहरूमा हेराई छ जुन कुनै पनि केसमा प्रस्ताव गरिन्छ।
सामान्य मोडमा र प्रिमियम मोडमा सञ्चारको बीच छनोट पनि प्रत्येक प्रयोगकर्तालाई प्रस्ताव गरिएको छ। सामान्य मोड प्राय: नि: शुल्क प्रस्ताव गरिन्छ। तर प्रीमियमको लागि तपाइँले तिर्नु पर्छ। लागत पनि अस्थिर हुन र समयको साथ परिवर्तन गर्न सक्दछ।
त्यसैले त्यहाँ एक विकल्प छ। र प्रत्येक प्रयोगकर्ताले यो छनौट आफ्नै लागि बनाउँछ। यस प्रकारका केही स्रोतहरूमा, यसलाई संचारको लि gender्ग मात्र होईन, तर त्यो देश जसका बासिन्दाहरू म कुरा गर्न चाहन्छु भन्ने छनौट गर्न पनि प्रस्ताव गरिन्छ। केहि साइटहरु मा तपाइँ आफ्नो पेशा वा आफ्नो वार्तालाप को रुचि, साथै उमेर र केहि अन्य प्यारामिटर को छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक स्रोतले यस छनौटलाई यसको विवेकमा नियन्त्रण गर्दछ। त्यसकारण यस स्रोतलाई स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ तपाईंले स्रोतमा दर्ता गर्नु अघि र अनियमित वार्तालापकर्तासँग अनलाइन कुराकानी गर्ने निर्णय गर्नु अघि।तिनीहरू अनुभव मार्फत देखा पर्दछन्। प्रयोगकर्ता व्यवहार र नियमले उनीहरूका सर्तहरू राख्दछ। आधुनिक साइटहरूमा यति धेरै प्रतिबन्धहरू छैनन्, तर तिनीहरू अवस्थित छन्। उदाहरण को लागी, उमेर प्रतिबन्धहरु। प्रयोगकर्ता उमेर १ 18 बर्ष भन्दा कम हुनुहुन्न।
प्रयोगकर्ताले अनलाइन च्याट रूलेटलाई विज्ञापन प्लेटफर्म वा स्पाम साइटको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्न। यि धेरै संसाधनहरूमा नियमहरूले यसलाई प्रतिबन्धित गर्दछ। यो बुझिन्छ। सबै पछि, मानिसहरू यहाँ संचारको लागि आउँछन्, र विज्ञापन हेर्न वा स्पाम वितरण गर्नको लागि होइन।
त्यस्ता धेरै स्रोतहरूमा, यसलाई अझै वेबक्याम बन्द गर्न निषेध गरिएको छ ता कि कसले तपाईंलाई कुरा गरिरहेको छ भनेर स्पष्ट छैन। वार्तालाप अनुहार सधैं देखिने हुनुपर्छ। तर केहि केसहरूमा तपाईं वेब क्यामेरासँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्न, तर च्याट र पत्राचारको माध्यमबाट।
आधुनिक च्याट च्याट एक तरीकाले भ्रमण गर्न सकिन्छ जुन आगन्तुकलाई फाइदाजनक छ। तपाईं च्याट भुक्तान गरिएको वा नि: शुल्क संस्करणमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। नि: शुल्क संस्करण छनौट गर्दा, तपाईं सजिलैसँग कुनै पनि व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं सही रूपमा स्विच गर्न सक्नुहुन्छ, बन्द र बन्द केहि गलत भयो भने। तर केहि प्यारामिटरहरू र सुविधाहरू सीमित छन् जब तपाईं यस च्याट नि: शुल्क भ्रमण गर्नुहुन्छ।
भुक्तान गरिएको भ्रमणले प्रत्येक आगन्तुकलाई बढी अवसरहरू प्रदान गर्दछ। सशुल्क मोडले तपाईंलाई साइटमा अज्ञात रूपमा केही च्याट रूलेटहरूमा भ्रमण गर्न अनुमति दिन्छ। बेनामी कुराकानीहरू विशेष रूपमा सिर्जना गर्न सकिन्छ ताकि प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो श्रोतमा उनीहरूको उपस्थितिको विज्ञापन नगर्ने। यो विभिन्न उद्देश्यका लागि सिर्जना गर्न सकिन्छ। र विभिन्न मनसायका साथ। भुक्तान गरिएको भ्रमणका साथ, अतिरिक्त विकल्पहरूले काम गर्दछ। उदाहरण को लागी, तपाईको मनपर्ने बातचीत को लागी विकल्प। उनी धेरै राम्ररी काम गर्छिन्। जे भए पनि, यो कुरा थाहा छ कि च्याट रूलेटले पूर्ण अनियमित वार्तालापहरूको छनोट गर्दछ। तर कहिलेकाँही वार्तालापकर्ता यति खुसी हुन्छ कि म भविष्यमा उहाँसँग कुराकानी गर्न जारी राख्न चाहन्छु। एक सशुल्क विकल्पले सम्भव बनाउँदछ तपाईंको मनपर्ने कुराकानीहरूलाई ती सूचीमा जोसँग तपाईं कुनै पनि समयमा संचार जारी राख्न सक्नुहुन्छ।
थप रूपमा, च्याटको लागि भुक्तान गर्दा, त्यहाँ अर्को अवसर छ: निजी संचार। यसको मतलब यो हो कि तपाइँ केवल एक विशेष व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ र यो लामो समयको लागि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंलाई कुराकानी मनपर्दछ भने, तपाईं पछि यसलाई जारी राख्न सक्नुहुन्छ।
"कालो सूची" प्रकार्य दुबै भुक्तान गरिएको र नि: शुल्क संस्करणहरूमा उपलब्ध छ। यो धेरै च्याट मोड र भिडियो मोड मा दुबै च्याट को प्रक्रिया को सुविधा प्रदान गर्दछ।
सशुल्क सत्रको मुख्य फाइदा एक व्यक्तिले अधिक विशेषाधिकार पाएको तथ्यको कारण हो। तर सामान्यमा, यदि तपाईले नि: शुल्क संचार छनौट गर्नुभयो भने, कोही पनि सञ्चारमा बिरामी हुने छैनन्। यसको विपरित, सञ्चारको प्रक्रिया आफैंमा केही पीडित हुने छैन यदि यो स्वतन्त्र छ।उदाहरण को लागी, भिडियो च्याट र कुराकानी छनौट गर्न को लागी क्षमता। हो, कुनै पनि प्रयोगकर्ता, भुक्तान गरिएको वा स्रोतमा नि: शुल्क पहुँच, उसले कसरी कुराकानी गर्ने छनौट गर्न सक्दछ। र तपाइँको वार्तालाप केवल यस तरीकाले प्रस्ताव गर्नुहोस्। भिडियो मोडमा च्याट गर्न वा च्याट गर्दा प्रयोगकर्ताहरूलाई नयाँ साथीहरू वा राम्रा व्यक्तिहरू समक्ष पुर्‍याउन सकिन्छ जसले निश्चित रूपमा नयाँ भावनाहरू र नयाँ अनुभवहरू थप्नेछ।
तर रमाईलो संचार र अद्भुत वार्तालाप बाहेक, च्याट रूलेट केहि समस्याहरू भरिन्छ। उदाहरण को लागी, खतरा। जो पहिलो पटक रूलेट च्याटमा आउँदछन् अनियमित परिचितहरू र अवसरहरूको संसारमा। र अब हामी के कुराकानी गर्दा तपाइँले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ र के तपाइँ सँधै तयार हुनुपर्दछ भनेर हेरौं:
सबै भन्दा पहिले, च्याट रूले संचार साझेदार को छिटो र सजिलो परिवर्तन शामेल छ। यसको मतलब यो छ कि तपाइँ अर्को व्यक्तिको स्विच गर्न सक्नुहुन्छ बटनको स्पर्शमा। यो खुशी छ। तर एकै साथ, यो सम्झन लायक छ कि तपाईं अर्को चाँडै अर्को वार्तालापको लागि पनि विनिमय गर्न सकिन्छ। तसर्थ, यसका लागि तयार हुनु सजिलो छ। 00 00००8
00 00००00 बेनामी कुराकानीमा कसैले कसैलाई चिन्दैन। तपाईं नयाँ नाम, थर, निवास स्थानको साथ आउन सक्नुहुन्छ। तपाईं संचारको लागि कुनै पनि भाषा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यद्यपि रूलेट च्याटहरू छन् जुन विशेष रूपमा एक भाषाको लागि डिजाइन गरिएको हो। उदाहरण को लागी, अंग्रेजी। वा रूसी। धेरै जसो सेवाहरू पूर्ण बिभिन्न भाषाहरूको लागि सिर्जना गरिएको थियो। तसर्थ, यहाँ तपाईं सुरक्षित रूपमा एक विदेशीको भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ। 00 00००8
00 00०००० च्याट रूलेटमा मुख्य रूपले मनोरन्जन समावेश छ, गम्भीर डेटि notको रूपमा होइन। त्यसकारण यस स्रोतलाई गम्भीर रूपमा नलिनुहोस्। यो मुख्यतया एक मनोरन्जन सेवा हो, त्यसैले यो लोकप्रिय भएको छ। र जारी राख्नको लागि गम्भीर परिचितहरूको लागि यहाँ नहेर्नुहोस्। यद्यपि त्यहाँ अपवादहरू छन्। विशेष गरी यदि तपाईं आफ्नो क्षेत्र वा शहर मा एक लोकप्रिय सेवा छनौट गर्नुभयो भने। 00 00००8
00 00०००० नि: शुल्क मिति धेरै स्क्यामरहरूलाई आकर्षित गर्दछ जसले विश्वसनिय प्रयोगकर्ताहरूबाट लाभ लिन चाहन्छ। जे होस् सुरक्षा सेवा सँधै कार्य गरिरहेको छ र आधुनिक च्याट च्याटलाई तुरुन्त प्रतिक्रिया दिँदै छ, स्क्यामरलाई भेट्ने मौका अझै ठूलो छ। 00 00००8
00 00००00 धोखाधडीको साथसाथै, सबै प्रकारका व्यक्तिहरू छन् जसले शरीरको ना naked्गो अंगहरू देखाउन सक्दछन्। यो प्रतिबन्ध द्वारा सजाय हो, तर तपाईं अझै पनि यस्ता व्यक्तित्वहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। यस अवस्थामा, तपाइँ केवल गुनासो लेख्न वा उपयुक्त बटन क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। 00 00००8
च्याट रूले आज ठूलो संख्यामा व्यक्तिलाई आकर्षित गर्दछ। यो खुशी हुन्छ, तर अर्कोतर्फ, अपर्याप्त व्यक्तित्वहरू भेट्ने अवसर बढ्छ। व्यावहारिक चुटकुले र विभिन्न चुटकुले दिशा पनि लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ। उदाहरण को लागी, prankers एक लामो समय पहिले च्याट रूले छान्नु भएको छ। र लोकप्रिय हुन क्रममा यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्।एन्टि-च्याट वा कुनै अन्य च्याट रूलेटमा कुराकानी गर्दा prankster कसरी चिन्ने? पहिलो पटकबाट यो गाह्रो हुन सक्छ, तर अझै पनि यो गर्न सम्भव छ। यहाँ prankers पहिचान गर्न केहि अंकहरू छन्:
असामान्य कपडा prankers बाहिर दिन सक्छ। नियमको रूपमा, उनीहरू रमाइलोको लागि भिडियो सिर्जना गर्छन् र ध्यानपूर्वक यसको लागि तयार गर्दछन्। तिनीहरूको कपडा प्रायः आर्टसी र असामान्य हुन्छ। वस्त्रले संचारको पहिलो दोस्रोदेखि लगभग एक स्टुपरमा कुराकानी ड्राइव गर्नुपर्छ। तसर्थ, यदि तपाईंसँग तपाईंको अगाडि मास्कमा वा विस्तृत कपडाहरूमा अन्तर्क्रियाकर्ता छ भने, त्यसो हो भने यो प्रानक हो। र केवल तपाईं मात्र उहाँसँग कुराकानी गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ वा अरू कसैलाई खोज्ने छैन। 00 00००8
00 00०००० चुटकुले मनोरन्जन र लोकप्रियताको लागि रेकर्ड गरिएका छन्। प्रान्कर आक्रामक हुन सक्छ वा यसको विपरित, अति नै प्यारो। उसले केहि गर्न सक्दछ जुन सामान्यतया स्वीकार्य आचरणको मानदण्डको विपरित हुन्छ। 00 00००8
00 00००00 तिनीहरूको लक्ष्य भावनाहरू र उनीहरूको व्यवहारलाई प्रतिक्रियाहरू रेकर्ड गर्नु हो। तिनीहरू यसको लागि प्रयास गर्छन् र विभिन्न तरिकाहरू प्रयास गर्छन्। तर सामान्य वार्तालापकर्ताबाट तिनीहरूको मुख्य भिन्नता भनेको उनीहरूले केहि गर्दैछन् जसले कुराकानीमा कडा भावनाहरू उत्पन्न गर्दछ: आश्चर्य, रीस, हँसा, लाज र अन्य कडा भावनाहरू। 00 00००8
च्याट रूलेट आधुनिक व्यक्तिहरूको लागि संचारको आधुनिक साधन हो। यदि तपाईंसँग व्यक्तिसामु बाहिर जानको लागि समय छैन भने, यदि तपाईं अन्य व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्न लाजमर्दो हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईंलाई आफ्नो वार्तालापकर्तालाई कसरी बोलाउने भनेर थाहा छैन भने, रूलेट च्याट प्रशिक्षणका लागि उत्तम ठाउँ हुनेछ। यहाँ तपाईं पूर्ण अपरिचितहरूसँग कुराकानी सुरु गर्न जान्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईं सजिलैसँग मनपराउन व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। र मन नपर्नेहरूसँग कुराकानी गर्न बन्द गर्नुहोस्। मुख्य कुरा भनेको उही समयमा मानव रूपमा व्यवहार गर्नु हो, रमाईलो कुराकानी गर्ने बानी बन्नुहोस् र सम्झनुहोस् कि पर्दाको अर्कोपट्टि पनि मानिसहरू छन्। तपाईसँग च्याट गर्न र च्याट गर्न पनि आउनुभएको हो जुन तपाईंसँग रमाईलो गर्न र विश्वको सबै चीजहरू च्याट गर्न।